आज कस्तो छ वर्षाको सम्भावना ? [तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानसहित] – Rapti Khabar
आज (शनिबार) पनि देशका विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि भारीसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेकाे मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ।
माैसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार अहिले बिहान कतै पानी परेकाे छैन। धेरैजसाे स्थानमा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली छ। याे भनेकाे धेरै ठाउँमा घाम लागेकाे छ। म
हाशाखाका अनुसार आज दिउँसो भने देशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ। साथै प्रदेश न. १ का एक वा दुई स्थानमा भारी भने वर्षाको समेत सम्भावना छ।
यसैगरी राती पनि देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भने एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले शनिबार बिहान ६ बजे जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ।
‘भारी वर्षाको सम्भावना देखिए पनि आजलाई त्यस्तो बाढीपहिरो नै जाने वर्षा हुने सम्भावना कम छ,’ मौसमविद् बासीले भनिन्।
दिउँसो : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश न. १ को एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
राति : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।सुदुर पश्चिम प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
काठमाडौं, भदौ १८ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हिमालय एयरलाइन्सले नियमित उडानको भाडादर सार्वजनिक गरेको छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन उद्धार उडानको लागि सरकारद्वारा स्वीकृत भाडादर लागू हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। यी भाडाहरु कर र एजेन्सी कमिशनसहितको हो। कुनै ट्राभल एजेन्सीले प्रकाशित भाडादरभन्दा बढी भाडा लिएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने कम्पनीले […]